Hoggaanka garabka dhallinyarada Maroodi-jeex ee KULMIYE oo kulan dardargelin ah la yeeshay qaybo ka mid ah da’yarta degmooyinka ee caasimadda | KULMIYE
Hoggaanka garabka dhallinyarada Maroodi-jeex ee KULMIYE oo kulan dardargelin ah la yeeshay qaybo ka mid ah da’yarta degmooyinka ee caasimadda
Hargeysa (Warbaahinta Xisbiga KULMIYE)- Garabka Dhallinyarada Gobolka Maroodi-jeex ee xisbiga KULMIYE, ayaa kulan dardargelin ah la yeeshay hawlwadeenno da’yar ah oo ku bahoobay taageerada xisbiga ee degmooyinka caasimadda.
Kulanka oo ka dhacay hoolka shirarka Cali Maarshaal ee xarunta Dhexe ee xisbiga KULMIYE maanta, waxa ka qaybgalay hoggaanka garabka Dhallinyarada heer gobol, saraakiil ka tirsan xisbiga iyo dhallinyaro badan oo ku midoobay urur ay u bixiyeen ‘Dhallinyarada KULMIYE u Heellan,’ waxaanna la iska xog-warraystay hawlaha shaqo ee dhallinyaradani hayso ee ku saabsan abaabulka iyo dadaallada xisbiga KULMIYE ku kasbanayo da’yarta.
Guddoomiyaha Garabka Dhallinyarada heer Gobol ee Maroodi-jeex ee xisbiga KULMIYE Mr. Cabdirisaaq Koosaar Maxamuud iyo ku-xigeenkiisa Mr. Cabdisamad Maxamed Xaashi, ayaa halkaa hadallo bogaadin shaqo ah iyo dardaaran sii xoojin ah u jeediyey dhallinyaradaasi, waxaanay u ballanqaadeen inay iyaguna garab ahaan mar walba garabtaagan yihiin, lana shaqaynayaan.
Xubno u hadlayey dhallinyarada ku bahoobay Dhallinyarada KULMYE u Heellan, ayaa faahfaahin ka bixiyey ururkooda ay sheegeen inay ku jiraan da’yar badan oo ku kala nool dhammaan degmooyinka iyo xaafadaha caasimadda Hargeysa ka kooban tahay, isla markaana sababta isku keentay ay tahay mabda’a xisbiga ee aanay ku midoobin wax kale. Waxa kaloo ay tilmaameen guulaha ay gaadheen muddadii ay shaqaynayeen iyo hiigsiga u qorshaysan oo ah inay ka midho-dhaliyaan guusha xisbiga KULMIYE ee talada dalka mar labaad.
Dhinaca kale, Saraakiil ka tirsan xisbiga KULMIYE oo ka qaybgalay kulankaasi oo ay ka mid yihiin Siyaasi Maxamed Abiib Yuusuf iyo Dr. Cabdixakiin Siciid Bustaale, ayaa soo dhaweeyey dadaalka ay wadaan dhallinyarada gobolka iyo da’yarta la shaqaynaysa ee ku wajahan u diyaargarowga doorashada Madaxtooyada ee xisbiga KULMIYE iyo sidii uu guul wayn uga soo hoyn lahaa.